Fikarohana momba ny firaisana LeBron James ho Reincarnation an'i James Naismith, Athlete ary Inventor de basketball: Fiovan'ny hazakazaka sy talenta fiainana taloha, miaraka amin'ny fahafahan'ny fanahy mifehy ny fizotry ny eritreritra - Fikarohana Reincarnation
LeBron James amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao an'i James Naismith, atleta ary mpamorona basikety: fanovana hazakazaka sy talenta taloha, miaraka amin'ny fahaizan'ny fanahy mifehy ny fizotry ny fitondrana
James Naismith any Canada
James Naismith dia teraka tamin'ny 6 Novambra 1861 tao amin'ny toeram-piompiana toeram-pambolena iray any Ontario, Canada, izay nitaizana azy. Efa kamboty izy tamin'ny mbola kely, niara-nipetraka tamin'ny nenitoany sy ny dadatoany i James.
Tamin'ny taona 1883, tamin'ny faha-21 taonany dia nankany Montréal Canada izy izay nisoratra anarana tao amin'ny Oniversite McGill. Teo, atleta kintana izy, nandresy metaly tamin'ny fanaovana gymnastika ary nilalao baolina rugby, baolina kitra, lacrosse ary baolina kitra kanadiana (afovoany). Mirefy 5 metatra ny halavany ary nirefy 10.5 kilao.
Naismith dia nahazo BA amin'ny Fanabeazana Ara-batana ary nampianatra io lohahevitra io tao amin'ny McGill, tsy ela dia lasa talen'ny atletisma voalohany.
Naismith ao Massachusetts sy ny fananganana Basketball
Nifindra tany Etazonia i James avy eo, nifindra tany Springfield, Massachusetts, ary lasa mpampianatra fampianarana ara-batana tao amin'ny YMCA International Training School.
Nandritra ny ririnina tany New England mangatsiaka, ny atleta dia lasa kivy be satria voafetra ny hetsika anatiny. Mba handroahana ny korontana, ny filohan'ny programa dia nandidy an'i Naismith hamorona lalao handrombahana ireo atleta ao amin'ny programa, izay tsy maka toerana be, afaka manampy ireo atleta mba hanana endrika, rariny ho an'ny mpilalao rehetra ary tsy dia marefo loatra, mampihena ratra. Naismith dia nomena herinandro roa hanamboarana ity lalao ity.
Mba hampihenana ny fifandraisana ara-batana eo amin'ireo mpilalao ka hampihena ny vintan'ny ratra, dia nieritreritra i Naismith fa hametraka hoop avo ambonin'ny lohan'ireo mpilalao. Nomena isa isaky ny nilalao baolina tao anaty hoop ilay mpilalao iray. Nisafidy ny hampiasa baolina baolina kitra izy, izay somary malefaka ihany koa, mba hampihenana ny vintan'ny ratra. Ny mpilalao dia afaka mandalo na manao dribble hanodinana ny baolina. Namintina ny lalao ho lalàna 13 i Naismith.
Ny lalao voalohany an'ny "Basket Ball" dia nilalao tamin'ny Desambra 1891. Niaina tamin'ny fotoana nijoroan'i Naismith ho nanatontosa ny lalao Olaimpika tamin'ny 1936, ary koa ny fahaterahan'ny NCAA Tournament tamin'ny 1939. Nodimandry izy tamin'ny Novambra 1939.
James Naismith dia niverina tao amin'ny fianakaviana amerikana afrikana
LeBron James dia teraka tao Akron, Ohio. Ny rainy dia nanana tantaram-piainana heloka bevava ary tsy teo amin'ny fiainan'i LeBron. I Gloria, reniny, dia niezaka nitady asa mahazatra. Mba hanomezana ny zanany lahy hanana fotoana lehibe kokoa hahombiazana amin'ny fiainana, dia navelany hiara-miaina amin'ny fianakavian'i Frank Walker, mpanazatra baolina kitra tanora eo an-toerana i LeBron. Walker dia nampiditra an'i LeBron tamin'ny basikety rehefa feno 9 taona izy.
LeBron James dia lasa lasa iray tamin'izy ireo mpilalao basikety lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra, miaraka amin'i Michael Jordan ihany raha mitovy taona aminy.
Fandrindrana mandritra ny androm-piainana: Azo inoana fa nifidy i Reincarnate i James Naismith ho lasa fianakaviana iray sy afrikana amerikana
Misy porofo marim-pototra fa ny fanahy dia mamolavola mandritra ny androm-piainana ary misafidy ny fianakavian'izy ireo. Hita mazava izany ao amin'ilay fanadihadiana Twin Study navoakan'i Ian Stevenson, MD an'ny Oniversiten'i Virginia. Stevenson, nandritra ny 40 taona dia nahangona 1500 mahery tamin'ny tranga fahatsiarovana ny fahazazana tamin'ny fahazazana.
Avy amin'ity vahoaka ity dia namantatra kambana 31 (kambana 62) izy izay nahatsiaro ny fiainany taloha tamin'ny antsipirian'ny antsipirihany izay ahafantarana ny toetrany taloha ary ny fahatsiarovana azy dia voamarina.
Tao anatin'ny 100 isan-jaton'ireo tranga ireo, ny zaza kambana dia nanana fifandraisana lehibe taloha, anisan'izany ny mpirahalahy, ny namana ary ny mpivady ihany koa. Kambana iray mirahalahy dia kambana tamin'ny fiainany taloha. Raha te hahalala bebe kokoa, azafady, mandehana:
Ian Stevenson, MD Reincarnation Twin Study
Ny herin'ny fanahy: ny zaza kambana dia novonoina ary avy eo dia manjary maty toy ny tranga kambana indray taloha-taloha tamin'ny kambana Tripathi
Kambana, reincarnation ary ny Embryology
Ho an'ny zaza kambana dia mitombo ho kambana indray ny kambana, ny fanahin'ireo kambana roa dia tsy maintsy afaka mitarika ilay toerana sy ny fianakaviana izay hitranga. Ho an'ny zaza kambana roa, ny atody roa samy hafa kambana (atody roa izay efa notsidihinin'ny sela mpitroka) dia fonenan'ny fanahy roa samihafa. Ny fisehoan'ny kambana dia ho hafa noho ny nipoiran'ny atody roa samy hafa izay nofidin'ny fanahy roa samihafa. Ny fanahy tsirairay dia manome endrika maoderina ho an'ny zaza vao misondrotra, izay manampy endrika tsara tarehy. Raha mila dinika momba ny reinkarnation sy ny endrika ivelany dia miangavy:
Ny fototry ny fisehoana ara-batana amin'ny tranga reincarnation
Ho an'ny zaza kambana mitovy, ny atody iray zezika dia mizara roa rehefa miteraka ary ny fanahy tsirairay avy dia mifehy ny antsasaky ny atody misy zezika. Mitovy ny fijerin'ireo kambana rehefa nipoitra avy amin'ny atody iray. Ny fanahin'ny iray amin'ireo zaza kambana dia manisy tombo-kase ny atody misy zezika miaraka amina modely angovo izay manampy amin'ny famolavolana endrika ho an'ireo kambana roa.
Ho an'ny tranga tsy misy kambana dia mitovy ny fizotrany fa tsy misy afa-tsy fanahy iray izay mandray ny fifehezana atody iray.
Raha hijery ireo tranga hafa izay ahatambatra indray ireo havan-tiana amin'ny alàlan'ny fahaterahana indray dia alao:
FAMPIANARANA SY FIVORIAM-BOLA novolavola tamin'ny alalan'ny fanambadiana
Misafidy ny hanana reincarnate ho amin'ny hazakazaka mainty
90 isan-jaton'ny atleta Basketball an'ny National Basketball dia Black ary 70 isan-jaton'ny atleta ao amin'ny National Football Association dia Black. Ny fandalinana dia naneho fa ny Afrikana any amin'ny faritra Kenya sy Etiopia dia ahitana ny fototarazo lehibe kokoa ny havokavoka mihoatra ny fahaizan'ny Kaokazy na ny firazanana hafa. Izany no antony be dia be ny mpandresy marathon avy any amin'ireo faritra any Afrika ireo.
Ny fahasamihafana eo amin'ny fahaizan'ny firazanana no ahafantarana ny tontolon'ny fanahy. Raha noforoninao ny lalao basikety ary te-hamerina ho lasa kintana amin'ny fanatanjahantena ianao, firenena iza no ho tonga ao anatiny?
Ny fahatakarana fa ny fanahy dia afaka manova hazakazaka, finoana ary zom-pirenena dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa
Ny ankamaroan'ny ady sy fifandirana dia mifototra amin'ny tsy fitoviana amin'ny marika ara-kolontsaina marika izay voalaza etsy ambony. Ny fiovana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo dia aseho amin'ny fandinihana tranga vaovao nataon'i Ian Stevenson. Ankoatr'izay, ny tranga iray manaitra izay mampiseho ny fanovana ny finoana sy ny tanindrazana dia tafiditra ao amin'ny reincarnation Anne Frank. Raha te hahalala bebe kokoa momba ity raharaha ity sy ny tranga hafa mitovy, miangavy anao hitsena:
Ny tranga taloha lasa misy amin'ny fanovana ny fivavahana, ny foko, ny tanindrazana ary ny fironana ara-poko
Raha hijery ny raharaha atleta hafa dia miangavy:
Kasia Reincarnation Sport sy ny Atleta
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endrika tarehin'i James Naismith sy LeBron James dia mitovy. Sizewize, Naismith tamin'ny androny nifaninana dia 5 metatra 10.5 santimetatra ny halavany ary milanja 178 pounds. LeBron dia 6 metatra 8 santimetatra ny halavany ary milanja 250 pounds.
Amin'ny ankapobeny, ny rafitry ny taolana amin'ny tarehy dia mijanona mitovy amin'ny fiainana mandra-pahafatiny, fa ny haben'ny vatana dia mety miovaova arakaraka ny fototarazo sy ny sakafo mahavelona.
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Naismith dia atleta kolejy kintana ary mpamorona basikety, raha LeBron James kosa dia iray amin'ireo jiro mamiratra indrindra amin'ny fanatanjahantena.
Fiovan'ny hazakazaka sy firenena: Kaismith dia kanadianina kanadiana. Ny mifanohitra amin'izany kosa i LeBron James dia afrikana-amerikana teraka tany Etazonia.